Haaruun Macruuf Muxuu Kala Jeedaa duqeymaha Been Abuurka ah?! [WARBIXIN]. – Shabakadda Amiirnuur
August 1, 2019 4:52 am by admin Views: 450
Duqaynta ugu horeysa ayuu wariyuhu sheegay inay dhacday 12kii bishan aan ku jirno ee July, isagoo intaas ku daray in duqaynta lala beegsaday saldhiga Xisbada ee magaalada Jilib, halkaasna lagu dilay tobaneeyo ka tirsan ciidamada xisbada iyo taliyahoodii oo uu magaciisa ku sheegay “Xasan Dheere” iyo ku xigeenkiisa iyo sarkaal saddexaad oo uusan magacaabin.
SomaliMeMo oo dabagal ku samaysay xogta wariye Haaruun Macruuf ayaa ogaatay in habayaraatee wax duqayn ah aysan xilligaas iyo xilli u dhow ka dhicin Degmada Jilib, warbixinta wariyhuna ay ahayd been-abuur. Sidoo kale SomaliMeMo waxaa ay ogaatay inaanu jirin shakhsi lagu magacaabo “Xassan Dheere” oo taliye ka ah saldhigga Xisbada Degmada Jilib.
Weerarka saddexaad iyo midka afaraad ee iyaguna been abuurka ah ayuu wariye Haaruun Macruuf waxaa uu sheegay inay shalay oo Talaado ah ka kala dheceen degmooyinka Jamaame iyo Bu’aale ee Wilaayada Jubooyinka. Duqaynta Jamaame ayuu sheegay in lagu beegsaday ciidamo ka tirsan Mujaahidiinta Al-Shabaab qaybtooda ka hawlgala gudaha Kenya iyo Sarkaal uu sheegay inuu taliye u ahaa ciidamadaas kaas oo uu magaciisa ku sheegay “Ayman”.